Bit By Bit - Running fanandramana - 4.6.2 Ataovy etika ny hevitrao: manolo, manadio, ary mihena
Ny toro-hevitra faharoa tiako ambara momba ny fananganana dingana nomerika dia miteraka olana amin'ny etika. Raha mipoitra amin'ny barnstars ao amin'ny Wikipedia i Restivo sy van de Rijt, dia midika fa ny etika dia ho lasa ampahany manan-danja kokoa amin'ny famolavolana fikarohana. Ho fanampin'ny rafitra etika izay mitarika ny fikarohana ho an'ny olom-belona izay horesahiko ao amin'ny toko faha-6, ireo mpikaroka manamboatra experientes dizitaly dia afaka maka hevitra avy amin'ny loharano samihafa: ny fitsipika ara-ethika dia natao mba hitarika ny fanandramana mifandraika amin'ny biby. Amin'ny ankapobeny, ao amin'ny boky manan-tantara nosoratan'izy ireo momba ny tetik'asa Humane Experimental Technique , Russell and Burch (1959) nanolotra fitsipika telo izay tokony hitarika ny fikarohana biby: manolo, manadio, ary mihena. Tiako ny manolotra fa afaka ampiasaina ihany koa ireo telo R ireo-amin'ny endrika miovaova kely-mba hitarihana ny famolavolana ny fanandraman'ny olombelona. Manokana,
Averina: Manomàna fanandramana amin'ny fomba tsy dia masiaka raha azo atao.
Fadio: Manadio ny fitsaboana mba hahatonga azy ho tsy mampidi-doza araka izay azo atao.
Ampihenana: Ampiheno ny isan'ny mpandray anjara amin'ny fanandramanao araka izay tratra.
Mba ahafahana manamboatra ireo raki-doko telo ireo ary asehony ny fomba ahafahan'izy ireo mitarika amin'ny fanandramana fanandramana tsara kokoa sy matihanina, dia hamaritra ny fanandramana an-tserasera aho izay niteraka adihevitra ara-tsosialy. Avy eo, hamaritra ny fomba amaritan'ny R ireo soso-kevitra azo antoka sy azo ampiharina amin'ny famolavolana ny fanandramana.
Ny iray amin'ireo adihevitra momba ny sehatra dizitaly indrindra dia notarihan'i Adam Kramer, Jamie Guillroy, ary Jeffrey Hancock (2014) ary nanjary nantsoina hoe "Emotional Contagion." Ny fanandramana dia natao tao amin'ny Facebook ary notarihan'ny fifangaroan'ny siansa sy fanontaniana mahaliana. Tamin'izany fotoana izany, ny fomba lehibe nifandraisan'ny mpiserasera tamin'ny Facebook dia ny Feed News, izay novolavolaina amin'ny algorithmika fanavaozam-baovao momba ny status Facebook avy amin'ny namana Facebook mpampiasa. Ny sasany tamin'ireo mpitsikera ao amin'ny Facebook dia nanoso-kevitra fa satria ny gazety Feed Feed dia manana lahatsoratra mahaliana-namana maneho ny fetiny farany-mety hampisy mampalahelo ny mpampiasa satria toa tsy dia mahafinaritra loatra ny fiainany raha ampitahaina. Etsy ankilany, angamba ny vokany dia ny mifanohitra amin'izany: mety ho hitanao fa mety hahita fifaliana ny namanao amin'ny fotoana tsara. Mba handinihana ireo fanombatombanana mifaninana ireo-ary hampivoatra ny fahatakarantsika ny fihetseham-pon'ny olona iray vokatry ny fihetseham-pon'ireo namany-Nanao fanandramana i Kramer sy ireo mpiara-miasa. Izy ireo dia nametraka mpisera manodidina ny 700,000 ho antoko efatra ho an'ny herinandro: "vondrona tsy mifandanja", izay nosakanana amin'ny teny ratsy (ohatra, "malahelo"), tsy hita ao amin'ny News Feed; Ny vondrona "vitsy an'isa", izay nosoratany tamin'ny teny mendrika (ohatra hoe "sambatra") dia nosakanana tsy nahy; ary vondrona mpiandraikitra roa. Ao amin'ny vondrona mpitantana ny "vondrona negativity-reduced", dia nosakanana tsikelikely ny lahatsoratra raha oharina amin'ny vondrona "vitsy an'isa", saingy tsy misy ifandraisany amin'ny votoatin'ny fihetseham-po. Ny vondrona mpitantana ny vondrona "positivity-reduced" dia natsangana tamin'ny fomba mifanaraka. Ny famolavolana ity fanandramana ity dia maneho fa ny vondrona mpiandraikitra mahomby dia tsy voatery ho tsy misy fiovana. Fa indraindray, ny vondrona mpiandraikitra dia mandray fitsaboana mba hamoronana fampitahana marina izay takian'ny fanontaniana momba ny fikarohana. Amin'ny tranga rehetra, ny lahatsoratra nosakanana tamin'ny News Feed dia mbola nomena ireo mpiserasera amin'ny alàlan'ny sehatra hafa ao amin'ny tranonkala Facebook.
Ny Kramer sy ireo mpiara-miasa dia nahatsikaritra fa ho an'ny mpandray anjara amin'ny toe-javatra mihamitombo ny toe-javatra, nihena ny isan-jaton'ny teny tsara ao amin'ny fanavaozana ny satany ary nitombo ny isan-jaton'ny teny ratsy. Etsy ankilany kosa, ny mpandray anjara amin'ny toe-piainana tsy mitongilana, dia nitombo ny isan-jaton'ireo teny tsara ary nihena ny teny ratsy (faha 4.24). Na dia izany aza, dia tena kely ny vokatr'izany: ny fahasamihafan'ny teny sy ny teny ratsy momba ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso dia teo amin'ny 1 amin'ny teny 1 000.
Sary 4.24: Porofon'ny fifindran'ny fihetseham-po (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) . Ny mpandray anjara amin'ny toe-javatra tsy mitombina dia nampiasana teny ratsy kokoa sy teny tsara kokoa, ary ireo mpandray anjara tamin'ny toe-javatra mihasimba - ny fihenanam-po dia nampiasa teny ratsy kokoa sy teny vitsy kokoa. Ny bara dia mampiseho fa misy hadisoana maromaro. Nifanaraka tamin'ny Kramer, Guillory, and Hancock (2014) , sary 1.
Alohan'ny hifanakalozana ny olana ara-tsosialy napetrak'io fanandramana io dia tiako ny mamaritra olana ara-tsiantifika telo amin'ny fampiasana sasantsasany amin'ireo hevitra avy any aloha tao amin'ny toko. Voalohany, tsy mazava ny fomba ifandraisan'ireo tsipiriany marina momba ny fanandramana amin'ny fanambarana ofisialy; Amin'ny teny hafa dia misy ny fanontaniana momba ny fananganana ny fahamendrehana. Tsy mazava fa ny lafy tsara sy ny teny ratsy dia tena mampiseho ny toe-pihetseham-pon'ny mpandray anjara satria 1) tsy mazava fa ny teny izay asehon'ny olona dia mampiseho tsara ny fihetseham-pony ary (2) tsy izany Mazava fa ny teknolojia fanadihadiana manokana izay azon'ny mpikaroka atao dia afaka mameno ny fihetseham-pony (Beasley and Mason 2015; Panger 2016) . Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia mety hisy fepetra ratsy eo am-pelatanana. Faharoa, ny famolavolana sy ny fanadihadiana momba ny fanandramana dia tsy milaza amintsika ny hoe iza no tena voakasika indrindra (izany hoe, tsy misy ny fandalinana ny heterogeneity ny vokatr'ilay fitsaboana) ary inona no mety hitranga. Tamin'ity tranga ity, maro ny fampahalalana momba ireo mpandray anjara ireo mpikaroka, saingy izy ireo dia heverina ho toy ny widgets amin'ny fanadihadiana. Fahatelo, ny haben'ny vokatr'io fanandramana io dia tena kely; Ny fahasamihafana eo amin'ny fepetra fitsaboana sy fanaraha-maso dia eo amin'ny 1 amin'ny teny 1 000. Ao amin'ny taratasin'izy ireo, ny Kramer sy ny mpiara-miasa dia manao ny tranga fa ny vokatr'ity lanjany ity dia zava-dehibe satria olona an-jatony tapitrisa no miditra ao amin'ny News Feed isan'andro. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia milaza izy ireo fa na dia kely aza ny vokatra ho an'ny olona tsirairay, dia be dia be izy ireo. Na dia manaiky io hevitra io aza ianao, dia mbola tsy mazava ny vokatr'io lanjany io raha ny fanadihadiana ara-tsiansa amin'ny ankapobeny momba ny fihanaky ny fihetseham-po (Prentice and Miller 1992) .
Ankoatra ireo fanontaniana ara-tsiansa ireo, andro vitsy taorian'ny nivoahan'ity gazety ity tao amin'ny Akademia Nasionaly momba ny Siansa , dia nisy ny fitarainana goavana avy amin'ireo mpikaroka sy ny gazety (horesahiko amin'ny antsipiriany ao amin'ny toko faha-6 ny adihevitra momba ity adihevitra ity. ). Ny olana nipoitra tamin'ity adihevitra ity dia nahatonga ny gazety hamoaka "fanehoan-kevitra mahaliana" momba ny etika sy ny fomba fijery etika amin'ny fikarohana (Verma 2014) .
Noho ny fiheverana momba ny fifandirana ara-pihetseham-po dia tiako ny mampiseho fa ireo telo ireo dia afaka manolotra soso-kevitra azo antoka sy azo ampiharina amin'ny fampianarana marina (na inona na inona mety hoeritreretinao manokana momba ny fitsipiky ny fanandramana manokana). Ny R voalohany dia manolo : ny mpikaroka dia tokony hikatsaka ny hanandrana fanandramana amin'ny teknika tsy dia milamina loatra ary mety hampidi-doza, raha azo atao. Ohatra, raha oharina amin'ny fanandramana fanandramana mifehy ny fanaraha-maso, ireo mpikaroka dia afaka nanararaotra ny fanandramana voajanahary . Araka ny voalaza ao amin'ny toko faha-2, ny fanandramana voajanahary dia toe-javatra iray izay mitranga any amin'ny tontolo izay mitovitovy amin'ny fanendrena azo anaovana fitsaboana (ohatra ny lottery iray hanapahana hevitra hoe iza no hapetraka ho miaramila). Ny tombontsoa ara-toekarena amin'ny fanandramana voajanahary dia tsy voatery manolotra fitsaboana ny mpikaroka: ny tontolo iainana no manao izany ho anao. Ohatra, mitovitovy amin'ny fifanandrasan'ny Emotional Contagion, Lorenzo Coviello et al. (2014) dia nanararaotra izay mety antsoina hoe fanandramana voajanahary ara-pihetseham-po. Ny Coviello sy ireo mpiara-miasa dia nahatsikaritra fa ny olona dia mamoaka teny ratsy kokoa sy teny vitsy kokoa amin'ny andro ito-orana. Noho izany, amin'ny fampiasana ny mari-pandrefesana hafahafa amin'ny toetr'andro, dia afaka nianatra ny fiantraikan'ny fiovana ao amin'ny News Feed izy ireo raha tsy mila hiditra an-tsehatra. Toy ny hoe nihazakazaka ny fihetseham-pony ho azy ireo ny toetr'andro. Ny antsipiriany momba ny paik'adiny dia somary sarotra, saingy ny tanjona manan-danja indrindra ho an'ny tanjontsika dia ny fampiasana Covoello sy ny mpiara-miasa amin'ny fampiroboroboana ny fihetseham-po raha tsy mampiasa ny fanandramana manokana.
Ny faharoa amin'ireo telo Rs dia manadio: mpikaroka dia tokony hikatsaka ny manatsara ny fitsaboana mba hahatonga azy ireo ho toy ny mampidi-doza araka izay azo atao. Ohatra, fa tsy manakana ny votoaty izay tsara na ratsy, ny mpikaroka dia afaka nanosika ny votoaty izay tsara na ratsy. Io fanamafisana fanamafisana io dia nanova ny votoatin'ny fihetseham-pon'ny mpandray anjara amin'ny mpandray anjara, saingy niresaka momba ny olana iray izay nanehoan'ireo mpitsikera izany: mety nahatonga ireo mpandray anjara handefa fampahalalana manan-danja ao amin'ny News Feed ireo fanandramana. Miaraka amin'ny famoronana ampiasain'i Kramer sy ireo mpiara-miasa, ny hafatra iray izay manan-danja dia toa voasakana ho toy ny tsy misy. Na izany aza, amin'ny famolavolana fanentanana, ireo hafatra izay nafindra toerana dia ireo izay tsy dia manan-danja loatra.
Farany dia mihena ny fahatelo R satria mila mitady hampihenana ny isan'ny mpandray anjara ny mpikaroka amin'ny faran'ny kely indrindra ilaina mba hahatratrarana ny tanjon'ny siansa. Ao anatin'ireo fanandramana analogy, dia nitranga izany noho ny vidin'ny fihenan'ny isan'ny mpandray anjara. Saingy amin'ny fanandramana nomerika, indrindra ireo izay manana vidin-javatra zero, ireo mpikaroka dia tsy mitaky làlan-tsarotra amin'ny habetsaky ny fanandramana, ary izany dia manana fahafahana hitarika amin'ny fanandramana tsy dia ilaina loatra.
Ohatra, i Kramer sy ireo mpiara-miasa dia afaka nampiasa fampahalalana mialoha momba ny mpandray anjara - toy ny fitondran-tena mialoha ny fitsaboana - mba hanatsarana ny fandalinany. Amin'ny ankapobeny, raha oharina amin'ny fampitahana ny ampahany amin'ny teny tsara ao amin'ny fepetra fitsaboana sy fanaraha-maso, i Kramer sy ireo mpiara-miasa dia afaka nampitaha ny fiovana amin'ny ampahany amin'ny teny tsara eo amin'ny fepetra; Ny fomba iray antsoina indraindray antsoina hoe rafitra mifangaro (tarehimarika 4.5) ary indraindray dia miantso fanatsarana ny fahasamihafan'ny fahasamihafana. Izany hoe, ho an'ny mpandray anjara tsirairay, ireo mpikaroka dia afaka namorona marimaritra iraisana (fitondran-tena amin'ny fitondran-java-tsoratry ny toeram-pitsaboana \_(-\_) an'ny fitondran-tena mialoha ny fitsaboana) ary nampitaha ny fanovana ny mpandray anjara tamin'ny fitiliana sy ny fepetra fitsaboana. Io fomba fisainan'ny fahasamihafana io dia manamora ny statistika, izay midika fa ny mpikaroka dia afaka mahazo ny fitokisan'ny statistika mitovy amin'ny fampiasana kely kokoa.
Raha tsy manana ny angon-drakitra matevina dia sarotra ny mahafantatra fa tena mahomby kokoa ny fanatsarana ny fahasamihafana eo amin'ny fahasamihafana eo amin'ity tranga ity. Saingy afaka jerentsika ireo fanandramana hafa mifandraika amin'ny hevi-diso. Deng et al. (2013) nitatitra fa tamin'ny fampiasana endrika endri-pifanakalozan-kevitra isan-karazany, dia afaka nampihena ny fanavahana ny tomban'ireto tombony ho 50% amin'ny alalan'ny fanandramana telo samihafa amin'ny aterineto; Ny valiny mitovy amin'izany dia notaterin'i Xie and Aurisset (2016) . Ity fihenam-bidy 50% ity dia midika fa ny mpikaroka nifanaovan'ny Emotional Contagion dia mety nahavita nanapaka ny ohatra nasehony tamin'ny antsasany raha toa ka nampiasa fomba fanao amin'ny fomba fijery hafa izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ny fiovana madinidinika amin'ny fanadihadiana, olona 350.000 no mety ho tsy nizara ny fandraisana anjara tamin'ny fanandramana.
Amin'ity fotoana ity, mety hanontany tena ianao hoe nahoana ireo mpikaroka no tokony hikaroka raha misy olona 350 000 ao amin'ny Emotional Contagion tsy ilaina. Misy singa roa miavaka amin'ny fifanoherana ara-pihetseham-po izay mampiady saina loatra amin'ny haben'ny habeny, ary ireo fiasa ireo dia nozarain'ny fanandramana an-tserasera maro: (1) misy fisalasalana raha manimba ny mpandray anjara sasany ary ny 2) ny fanandramana tsy an-tsitrapo. Toa mety tsara ny manandrana manandrana ny fanandramana izay manana ireo singa ireo kely dia kely azo atao.
Mazava ho azy, ny faniriana hampihenana ny haben'ny fanandramanao dia tsy midika fa tsy tokony handefa zavatra goavambe goavana ianao. Midika fotsiny fa ny fanandramanao dia tsy tokony ho lehibe noho ny tokony hahatratrarana ny tanjon'ny siansa. Fomba iray manan-danja ahafahana maka antoka fa ny fanandramana dia araka ny tokony ho izy dia ny fanatanterahana ny fanadihadian'ny herinaratra (Cohen 1988) . Tamin'ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana, ny mpikaroka tamin'ny ankapobeny dia nanao fanadihadian'ny herinaratra mba hahazoana antoka fa ny fandalinan'izy ireo dia tsy kely loatra (izany hoe, ambany hery). Ankehitriny anefa, ireo mpikaroka dia tokony hanao fanadihadiana momba ny herinaratra mba hahazoana antoka fa ny fandalinan'izy ireo dia tsy lehibe loatra (izany hoe, matanjaka be).
Ho famaranana, ireo R's telo dia manolo-tanana, manatsara ary manatsara-manome fitsipika izay afaka manampy ireo mpikaroka hanangana ny etika ho ao anaty drafitra fanandramana. Mazava ho azy, ny tsirairay amin'ireo fiovaovana mety amin'ny Emotional Contagion ireo dia mampiditra fifanarahana. Ohatra, ny porofo avy amin'ny fanandramana voajanahary dia tsy voatery ho madio hatrany amin'ny fanandramana mifandimbindimby, ary ny fanamafisana ny votoaty dia mety ho sarotra kokoa noho ny fanakanana votoaty. Noho izany, ny tanjon'ny soso-kevitra ireo fiovana ireo dia tsy ny faharoa-maminavina ny fanapahan-kevitry ny mpikaroka hafa. Raha ny tokony ho izy, dia ny hampiseho hoe ahoana no azo ampiharina amin'ny toe-javatra misy toe-javatra misy. Raha ny marina, ny olana momba ny varotra dia tonga amin'ny fotoana rehetra amin'ny famolavolana fikarohana, ary mandritra ny vanim-potoana dizitaly, ireo mpivarotra ireo dia hitombo hatrany ny fiheverana etika. Any aoriana any, ao amin'ny toko faha-6 dia hanolotra fitsipika sy fitsipika fototra izay afaka manampy ireo mpikaroka hahatakatra sy handinika ireo fivarotana ireo.